Kushamwaridzana kumadokero kweUnited States kuri kumutsazve! Mitoro inozorodzwa kumusoro !! Kufungidzira kweiyo yekutakura chiyero maitiro enzira dzakasiyana muhafu yepiri yegore iri kuuya
Muvhiki rapfuura, midziyo yemidziyo kubva kuAsia kuenda kuUnited States neEurope yakarova zvakanyanya. Kune makambani ari kuda kupinda mwaka wepamusoro wekuvakazve hesera, mitengo yekufambisa inoenderera ichiramba yakakwira. Zvinoenderana neDrewry World Container Ind ...
Kutakura kuchengetedza uye nzira dzekuwedzera hupenyu hwebasa
kuchengetedza Kuchenesa Paunobvarura chinotakura kuti chiongororwe, tanga watora mifananidzo uye dzimwe nzira kuita rekodhi rechitarisiko. Pamusoro pezvo, reurura huwandu hwesainzi girobhu uye sora mafuta ekuzora usati wachenesa chinotakura. bvunzo kuitira kusiyanisa whethe ...
Wholesale OEM / ODM China Rakasonererwa Mupiro Block Kupa NSK NTN NACHI Koyo Timken SKF UCP 207-20 / UCP 209-28 / UCP 207-21 / UCP 207-22 / UCP306 Housing Auto Kubereka Auto Pressed Units Kubereka
Insert inobereka nedzimba imhando yekutakura chinhu chinobatanidza kutenderera uye kutakura dzimba. Mazhinji emabheringi ekutenderera epanze akagadzirwa nedenderedzwa rekunze dhayamita, uye akaisirwa pamwe chete nechigaro chekunze chinotakura chine buri remukati rakatenderera. Chimiro chakasiyana, ...
Kubereka Brand Agent
Linqing Meifuler nemazvo Kupa Co., Ltd.i fekitari kushandisa kugadzirwa uye rokutengesa pamusoro mutsago misa mabheyaringi. Fekitori yakazara inosanganisa block block, kugadzira, kupenda uye kubheka, uye kukuya nekugadzirisa kwekutakura mhete dzemukati nekunze. The chigadzirwa unhu M ...
Yakakwira-kumagumo mutsago unovhara zvigadzirwa
1: Iyo yepamusoro-magumo zvigadzirwa inogadzirwa nefekitori yedu ese anotora F-chisimbiso dhizaini. Isu tiri parizvino imwe yemafekitori mashoma muChina ayo ehunyanzvi anotora madhizaini akadaro. Rudzi rwechisimbiso urwu runokwanisa kudzivirira guruva kupinda muchigadzirwa. 2: Zvese zvigadzirwa zvedu zvinoshandisa zvakanyanya hea ...
Nzvimbo nyowani yekutangira uye rwendo rutsva rweMeflle Bearings muna 2020
2020 igore rekuti vanhu vachabatwa vasina hanya. Hutachiona hutsva hwekorona hwatsvaira nyika, uye vanhu pasirese vakafukidzwa nekutya, kushomeka kwezvinhu, uye nekukasika kuwedzera kwekushayikwa kwemabasa munyika dzakasiyana siyana. Pasi pemamiriro enzvimbo yakaipa iyi, vatungamiriri veYandian T ...
Saizvozvowo yakavakwa sebhora mabheyaringi, roller mabheringi ane mutsetse wekubata pane kunongedzera kusangana, ichivagonesa iwo akakura kugona uye epamusoro kukatyamara kuramba. Iwo anotetereka pachawo anouya mune akati wandei maumbirwo, anoti, cylindrical, idenderedzwa, tapered, uye tsono. Cylindrical chinotenderera mabheyaringi kutarisira iwe ...
Hwakajairika kutakura bhora ine nzira yemukati neyekunze, akati wandei ezvinhu akapatsanurwa neanotakura, uye, kazhinji, nhoo uye / kana zvisimbiso zvakagadzirirwa kuchengetedza tsvina kunze uye kuzora mafuta mukati. Kana yaiswa, mujaho wemukati unowanzo svinirwa shaft uye mujaho wekunze wakaitirwa mune imwe imba. ...